နောက်ဆုံးဖရောင်းတိုင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » နောက်ဆုံးဖရောင်းတိုင်
Posted by smytu1996 on Sep 22, 2010 in News |7comments
ဒီပုံပြင်မှာ ရည်ရွယ်ချက် ရှိပါသည်။
လူဆိုတာ တစ်ယောက်ထည်း နေလို့ မရဘူး။ အသိုင်းအဝိုင်း၊ အပေါင်းအသင်းနဲ့နေရတယ်။ အနည်းဆုံး ကိုယ့်မိသားစုနဲ့ ပေါင်းရတယ်။ သင်းရတယ်။ အမြဲတမ်း ထိတွေ့ဆက်ဆံနေရတော့ စိတ်ထဲမှာ အဆင်မပြေမှုတွေ၊ ပြဿနာတွေ၊ အားမလိုအားမရဖြစ်မှုတွေ ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီပုံပြင်လေးဟာ
အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုနဲ့ တစ်ခုအကြား၊ မိဘနဲ့ သားသမီးအကြား၊ ဆရာနဲ့ တပည့်အကြား၊လင်မယား နှစ်ယောက်အကြား၊ သူငယ်ချင်း နှစ်ယောက်အကြားမှာ ထားသင့်ထားအပ်တဲ့ အတွေးတစ်ခုကို ပေးပါလိမ့်မယ်။
တစ်ခါတုန်းက……….အလင်းမရှိဘဲ မှောင်နေတဲ့ ခန်းတစ်ခန်းထဲမှာ ဖယောင်းတိုင်ကလေး (၅)တိုင်ရှိတယ်။ အဲဒီ ဖယောင်းတိုင်တွေမှာ အလင်းကိုယ်စီနဲ့ပေါ့။ ဖယောင်းတိုင်(၅)တိုင်ရဲ့ အလင်းအားကြောင့် မှောင်မည်းနေတဲ့အခန်းဟာ လင်းထိန်နေတော့တယ်။ ဒီအခန်းထဲကို လေပြေပျော့လေး တိုက်ခတ်နေသတဲ့။ တစ်ခါတစ်ခါမှာ လေဟာ
ပြင်းသွားလိုက်၊ တစ်ခါတစ်ခါမှာ လေဟာ ငြိမ်သွားလိုက်နဲ့ပေ့ါ။
လေတစ်ချက်အဝေ့မှာ ဖယောင်းတိုင်လေး တစ်တိုင်ီးငြိမ်းသွားတယ်။ အခန်းဟာ အလင်းအား နည်းနည်း လျော့သွားတယ်။အဲ့ဒီဖယောင်းတိုင်လေးကို “အချစ်“ လို့
နာမည်ပေးကြည့်ရအောင်။ “အချစ်ဆိုတဲ့ အလင်းအားလေး“ လျော့သွားတော့ အခန်းဟာ နည်းနည်းလေး မှောင်သွားတယ်။
နောက်ထပ် လေအဝှေ့မှာ ဒုတိယ ဖယောင်းတိုင်လေး ငြိမ်းသွားပြန်တယ်။ အဲဒီ ဖယောင်းတိုင်လေးကို “သံယောဇဉ်“ လို့ နာမည်ပေးကြည့်ရအောင်။ ဒီအခန်းထဲမှာ “အချစ်“ ဆိုတဲ့ အလင်းရောင်ရယ်၊ “သံယောဇဉ်“ ဆိုတဲ့ အလင်းရောင်ရယ်
မရှိတော့ဘူး။ အခန်းဟာ အမှောင်ထု ကြီးစိုးလာတော့တယ်။
ဒီလိုနဲ့ နောက်ထပ် “`လေတစ်ချက်“ အဝေ့မှာ တတိယ ဖယောင်းတိုင်လေး ငြိမ်းသွားပြန်တယ်။ အဲဒီဖယောင်းတိုင်လေးကို “မေတ္တာတရား“ လို့ နာမည်ပေးကြည့်ရအောင်။ ဒီလိုပဲ… နောက်ထပ် လေအဝေ့တစ်ချက်မှာ စတုတ္ထဖယောင်းတိုင်လေး
ငြိမ်းသွားပြန်တယ်။ ဒီဖယောင်းတိုင်လေးကိုတော့ “ကရုဏာ တရား“ လို့ နာမည်ပေးကြည့်ရအောင်။
ဖယောင်းတိုင် (၅) တိုင် အလင်းအားရှိတဲ့ ဒီအခန်းဟာ ဖယောင်းတိုင်
(၁)တိုင်မျှသာ အလင်းအားရှိတော့တယ်။ ဒီနောက်ဆုံး ဖယောင်းတိုင်လေးသာ လေအဝေ့မှာ မီးညွန့်ကလေးငြိမ်းသွားခဲ့ရင် ဒီတစ်ခန်းလုံး မှောင်မည်းသွားတော့ မှာပါပဲ။
ဖြစ်ချင်တော့ ဒီအခန်းထဲကို လူတစ်ယောက် ရောက်လာတယ်။
“အခန်းကြီးက မှောင်းမည်းနေတာပဲ။ တော်သေးတာပေါ့။ ဖယောင်းတိုင်လေးတစ်တိုင် လင်းနေသေးလို့`ပြောပြောဆိုဆို ဖယောင်းတိုင်ရဲ့ မီးညွန့်ကို လက်ဝါးလေးနဲ့ ကာလိုက်တယ်။
အလင်းရောင် မှိန်ပျပျအောက်မှာ မီးငြိမ်းနေတဲ့ ဖယောင်းတိုင် (၄)တိုင်ကို တွေ့သွားတယ်။ ချက်ချင်းဆိုသလိုပဲ နာက်ဆုံးကျန်နေတဲ့ ဖယောင်းတိုင်ရဲ့ မီးညွန့်ကိုကူးပြီး မီးငြိမ်းသွားခဲ့တဲ့ ဖယောင်းတိုင်လေးတွေကို မီးကူးပေးလိုက်တယ်။ ဒီအခန်းက အရင်အတိုင်းပဲ ပြန်ပြီး လင်းထိန်သွားပါတော့တယ်။
စာဖတ်သူကို မေးပါရစေ……ဒီနောက်ဆုံးကျန်တဲ့ ဖယောင်းတိုင်လေးကို ကျွန်တော်တို့ နာမည်ပေးကြည့်ကြရအောင်။ စာဖတ်သူလည်း ကြိုက်သလို နာမည်ပေးပါ။
ကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ နာမည်လေးတော့ ရှိတယ်။ ကျွန်တော်က နောက်ဆုံး ဖယောင်းတိုင်လေးရဲ့ နာမည်ကို “နားလည်ပေးမှု၊ စာနာပေးမှု ဖယောင်းတိုင်“လို့ နာမည်ပေးထားတယ်။
တွေးကြည့်ရအောင်။လူတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်အကြားမှာ “နားလည်ပေးမှု၊ စာနာပေးမှု“ ဆိုတဲ့ အလင်းအား ရှိတဲ့ ဖယောင်းတိုင်လေးသာ ရှိနေသေးရင် “အချစ်“ဆိုတာ
ပြန်ဖြစ်နိုင်တယ်။ “သံယောဇဉ်“ ဆိုတာ ပြန်ဖြစ်နိုင်တယ်။ “မေတ္တာတရား၊ကရုဏာတရား“တွေ ပြန်ဖြစ်နိုင်တယ်။ “နားလည်ပေးမှု၊ စာနာပေးမှု“ ဆိုတဲ့
ဖယောင်းတိုင်လေးသာ မီးငြိမ်းသွားခဲ့ရင်… အခန်းကြီး မှောင်မည်းသွားသလို အချစ်တွေ၊ မေတ္တာတရားတွေ၊ သံယောဇဉ်တွေ၊ ကရုဏာတရားတွေ ပြန်ဖြစ်ဖို့
မလွယ်တော့ပါဘူး။ လူ့ဘဝရဲ့ အနှစ်သာရလည်း ပျက်စီးသွားတော့မှာပါပဲ။
မိသားစု အချင်းချင်းအကြားမှာ၊ သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်အကြားမှာ၊
အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုနဲ့ တစ်ခုအကြားမှာ “နားလည်ပေးမှု၊ စာနာပေးမှု“ဆိုတဲ့ ဖယောင်းတိုင်လေး လင်းနေဖို့ လိုမယ်ထင်ပါတယ်။ ဒီဖယောင်းတိုင်လေးသာ
မီးငြိမ်းသွားခဲ့ရင်… လူမှုဆက်ဆံရေးရဲ့ ပျော်စရာကောင်းတဲ့ သဘာဝကို ခံစား နားလည်နိုင်တော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ချစ်သူနှစ်ယောက်အကြားမှာ “နားလည်ပေးမှုနဲ့ စာနာပေးမှု“ ရှိရင် ပျော်စရာ သိပ်ကောင်းမှာပဲ။ မိဘအပေါ်မှာ နားလည်ပေးတတ်တဲ့ သားသမီးတွေကို ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရတဲ့ မိသားစုဟာ
ပျော်စရာကြီးပါ။ ဒီလိုပါပဲ နားလည်ပေးတတ်တဲ့၊ စာနာပေးတတ်တဲ့ မိဘတွေရဲ့ သားသမီးဖြစ်ခွင့်ရရင်လည်း ပျော်စရာပါပဲနော်။
ကိုယ့်ကို နားလည်ပေးတဲ့၊ စာနာပေးတဲ့ ချစ်သူနဲ့သာ အတူနေခွင့်ရရင်အချစ်ဆိုတာ ပျော်စရာပဲလို့ ခံစားမိမှာပါ။
အပြန်အလှန် နားလည်ပေးတဲ့၊ စာနာပေးတဲူ့အဖွဲ့အစည်းတွေသာ ကျွန်တော်တို့ ဝန်းကျင်းမှာရှိခဲ့ရင် ကျွန်တော်တို့ လူ့ဘောင်လောကကြီးဟာ ဒီထက်ပိုပြီး သာယာလာပါမယ်။ ငြိမ်းချမ်းလာပါမယ်။ တိုးတက်လာပါမယ်။ ပျော်စရာလည်း
ကောင်းလာပါမယ်။ ဒါကြောင့် ဘယ်နေရာမှာ မဆို “နားလည်ပေးမှုနဲ့ စာနာပေးမှု“အပြန်အလှန်ရှိကြမယ်ဆိုရင် လောကကြီးဟာ ငြိမ်းချမ်းနေမှာပါ။
ဒါပေမယ့်….“နားလည်ပေးမှုနဲ့ စာနာပေးမှု “ ကိုတော့ အလွဲသုံးစား မလုပ်သင့်ဘူးနော်။
“နားလည်ပေးမှုနဲ့ စာနာပေးမှု“ ကို အခွင့်ကောင်းမယူသင့်ဘူး။
“နားလည်ပေးမှုနဲ့ စာနာပေးမှု“ ကို တန်ဖိုးမဲ့အောင် မလုပ်သင့်ဘူးနော်။
စာဖတ်သူလည်း နောက်ဆုံး ဖယောင်းတိုင်လေးရဲ့ နာမည်ကို ဘယ်လိုများ မှည့်ခေါ်ချင်ပါသလဲ။ဒီပုံပြင်လေးကို ဖတ်ပြီး….
“ချစ်သူတွေ၊ သူငယ်ချင်းတွေ၊ မိသားစုတွေ၊ လူသားတွေ၊ အဖွဲ့အစည်းတွေ“ရဲ့ကြားမှာ “နားလည်ပေးမှုနဲ့ စာနာပေးမှု“ ဆိုတဲ့ အလင်းရောင်ကလေးနဲ့ `အချစ်တွေ၊ သံယောဇဉ်တွေ၊ မေတ္တာတရားတွေ၊ ကရုဏာတရားတွေ“ ပြန်ပြီး
PS:အစားကောင်းစားရရင် ခင်မင်ရတဲ့သူငယ်ချင်းတွေကို သတိရမိသလို စာကောင်းကောင်းလေး တပုဒ်ဖတ်မိရင်လဲ သူငယ်ချင်းတွေကိုပါ သိစေချင်၊ဖတ်စေချင်လို့ပါနော် …………..
Shared from my email,thanks…
ဒီစာလေးကို ဖတ်ဖူးတယ်။ ဒါနဲ့ဆိုရင်2ခါပေါ့။ အရမ်းလည်း ကြိုက်တယ်။
ကျနော်ကတော့ ဖော်ဝပ်မေးလ်ကနေ တဆင့်ပြန်ပြီး မျှဝေသူတွေကို မေတ္တာရပ်ခံပေးချင်တာကတော့
ဘာလို့လဲဆိုတော့ အချောင်ကြိုက်သူတစ်ချို့က အဲလို ဖော်ဝပ်မေးကရလာတယ်ဆိုရင် သူ့နာမယ်တပ်ပြီး ခပ်တည်တည်နဲ့ဖြန့်ရော။
တကယ်လိူ့ လူမိသွားပြန်တော့ မှဖော်ဝပ်မေးလ်ကရတာဆို ၀န်ခံပါတယ။်
အဲဒီမှာ အောက်ကစာတွေပါ ဆက်ရေးပေးထားပါတယ်..။
ဆရာ ဦးဘုန်း(ဓာတု) ၏ နီးနီးဝေးဝေး အတွေးလက်ဆောင် စာအုပ်မှ ဆရာ၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် အွန်လိုင်းပေါ်မှ စာဖတ်ပရိသတ်များအတွက် တွေးတော ကြံဆ နိုင်ဖို့ရန်အတွက် အားဆေး တစ်ခွက်အနေနဲ့ ပြန်လည် ရေးသား ဖော်ပြပေးလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
အားလုံးပဲ…. တွေးတော ကြံဆ နိုင်ကြပြီးတော့ ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ မိသားစု ဘဝလေးများကို နားလည်ပေးမှု ၊ စာနာပေးမှုလေးတွေနဲ့ အတူ ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆန္ဒပြုရင်း………….
ဆရာ ဦးဘုန်း(ဓာတု) ၏ နီးနီးဝေးဝေး အတွေးလက်ဆောင် စာအုပ်မှ ..ဖြစ်ပါတယ်လို့…ထင်ပါကြောင်း…။
ဒီစာကို ရွာထဲမှာလဲ တစ်ခါဖတ်ဖူးပါသဗျာ…………………
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မဖတ်ဖူးသူတွေ ဖတ်ဖြစ်တာပေါ့၊
ကောင်းတဲ့စာတွေဆိုတော့ မူရင်းစာရေးသူကို Credit ပေးသင့်ပါတယ်။
ကိုယ်က site တွေစုံအောင် မဖတ်ဖြစ်တော့ တင်ပေးတာလေးတွေကို အားပေးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဖြန့်ဝေပေးချင်တဲ့ စေတနာထက် မူရင်းရေးသူရဲု့ နာမည်လေးကိုတော့ ထည့်ပေးကို ပေးရမယ်။ စာအုပ်တွေရိုက်ထားရင် ၀ယ်မှ ဖတ်လို့ရတယ်။ အလကား မရဘူး။ ခု Internet ခေတ်မှာ အလကားဖတ်လို့ရတယ်။ ဒါပေမယ့် စာရေးသူရဲ့ ဦးဏှောက်ကို ဖောက်စားတာမျိုးတော့ မလုပ်သင့်ဘူးပေ့ါ။